Klopp oo ku dhawaaqay in safka Liverpool ay ka maqnaan doonaan SHAN ciyaaryahan kulanka Chelsea – Gool FM
Klopp oo ku dhawaaqay in safka Liverpool ay ka maqnaan doonaan SHAN ciyaaryahan kulanka Chelsea
Dajiye December 31, 2021
(Liverpool) 31 Dis 2021. Klopp ayaa ku dhawaaqay in safka Liverpool ay ka maqnaan doonaan SHAN ciyaaryahan kulanka Chelsea, kaasoo Axada soo socta lagu ciyaari doono garoonka Stamford Bridge, kana tirsan kulammada Isbuuca 21-aad horaalka Premier League.
Liverpool ayaa heshay war naxdin leh oo sheegaya in saddex ciyaartoy laga helay caabuqa Korona Fayras saacadihii lasoo dhaafay, sidaas darteedna ay seegi doonaan kulanka Chelsea, waxaana intaas sii dheer inay maqan yihiin Thiago Alcântara iyo Takumi Minamino.
Tababaraha Jarmalka ah ayaa diiday inuu shaaca ka qaado seddexda ciyaaryahan ee laga helay caabuqa Korona Fayras, isaga oo timaamay in la soo bandhigi doono magacyadooda maalinta liiska rasmiga ah ee xiddigaha kooxda lagu dhawaaqo.
Jurgen Klopp ayaa sidoo kale cadeeyay in Thiago Alcântara uu ka dhaawacan yahay bowdada, walina ma cada arrimaha ku saabsan mudada uu garoomada ka maqanaan doono, isaga oo timaamay inay muhiim tahay inuu maro baaritaano cusub.
Klopp ayaa sidoo kale wuxuu hadalkiisa intaa ku daray in Takumi Minamino uusan diyaar u ahayn inuu ciyaaro kulanka Chelsea, waxayna tani ka dhigeysaa in shaqada tababare Klopp ee kulanka Blues ay tahay mid adag, maadaama ay ka maqan yihiin ciyaartoy muhiim ka ah kooxda.
Tababaraha kooxda Chelsea ee Thomas Tuchel oo ka jawaabay hadalladii kululaa ee Lukaku
Carragher oo sheegay in Liverpool aysan ku guuleysan koobab ku filan inta uu hoggaaminayay Klopp